Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Nanampy sidina vaovao 100 mahery avy any New York i Delta
Nanampy sidina vaovao 100 mahery avy any New York i Delta.
Ny fampitomboana ny fahafahan'ny Delta Air Lines dia mamerina tsy an-kiato amin'ireo tsena amerikana 40 ambony avy amin'ny seranam-piaramanidina JFK sy LaGuardia any New York.
Delta Air Lines dia manampy sidina mihoatra ny 100 isan'andro any NYC amin'ity fararano ity - fitomboana 25% raha oharina amin'ny fahavaratra 2021.
Ny Delta Air Lines dia mamerina amin'ny laoniny ny serivisy tsy an-kijanona amin'ireo tsena anatiny 40 an-tampon'ny New York City.
JFK sy ny mpitatitra entana lehibe indrindra an'ny LGA izay miasa mihoatra ny 400 sidina isan'andro mankany amin'ny toera-misy 92.
Taorian'ny vanin-taona mafana fanarenana, Delta Air Lines dia tsy miadana amin'ny famerenana sidina sy toerana hafa ho an'ny orinasan'ny New York sy ny mpandeha miala voly.
Tamin'ny Novambra, Delta Air-dalana, dia hanampy mihoatra ny 100 ny fiaingana isan'andro avy any Seranam-piaramanidina John F. Kennedy ary ny seranam-piaramanidina LaGuardia raha oharina amin'ny fandaharam-potoanan'ny zotram-piaramanidina fahavaratra 2021 - mandika seza fanampiny 8,000 eo ho eo isan'andro ho an'ny olona sy ny toerana tian'ny New York.
Miaraka amin'ny fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa an-trano miverina amin'ny ambaratonga 2019, Delta Air-dalana, dia mifantoka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fahafaha-manao soa aman-tsara sy azo ianteherana satria mitombo ny fitsangatsanganana ara-barotra miaraka amin'ireo boky tsy hita hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina.
"Manampy fahafaha-manao 25% bebe kokoa izahay amin'ity fararano ity mba hamaly ny fangatahana lehibe amin'ny fivezivezena amin'ny raharaham-barotra sy iraisampirenena amin'ny taona ho avy," hoy i Joe Esposito, Delta's SVP - Network Planning. "Manohy manome safidy sy fahafaha-manao bebe kokoa izahay eo am-pananganana ny fifandraisanay manerantany ary manome izay tsara indrindra ataon'ny Delta - mametraka ny mpanjifanay ho lohalaharana amin'ny serivisy miavaka sy azo antoka ary traikefa amin'ny dia lavitra."
Tsy ny Delta ihany no hamerina amin'ny laoniny ny serivisy tsy miato amin'ireo tsena anatiny 40 malaza indrindra any New York amin'ny volana ho avy, fa ny tsena fandraharahana marobe ihany koa dia hahita fisondrotana misy dikany amin'ny safidy sidina, ao anatin'izany ny Boston (BOS), Washington, DC (DCA), Raleigh- Durham (RDU) sy Charlotte (CLT). Ity dia manaraka ny serivisy Delta efa nanitatra ny tsena orinasa lehibe indrindra an'ny NYC tamin'ny fiandohan'ny fararano ity, toa an'i Chicago (ORD), Dallas / Ft. Worth (DFW) sy Houston (IAH) - ampahany amin'ny fomba fiasa feno fiheverana nataon'i Delta hanampiana fahaiza-manao mifanaraka amin'ny fiverenan'ny fangatahana.
Delta ihany koa dia namoaka serivisy LGA vaovao ho any Toronto (YYZ) ary hanomboka sidina vaovao mankany Worcester, Massachusetts (ORH) manomboka ny 1 Novambra.
Delta dia hanolotra sidina sy seza betsaka indrindra amin'ny mpitatitra rehetra ao amin'ny JFK sy LGA miaraka amin'ny fiaingana 400 isan'andro mankany amin'ny toerana 92 ​​an-trano sy iraisam-pirenena. Ary isaky ny sidina Delta amin'ny JFK, LGA sy EWR izao dia hanolotra traikefa amin'ny Kilasy Voalohany, noho ny fanesorana ireo fiaramanidina kely misy seza 50 avy amin'ny tsenan'ny NYC rehetra.
Delta dia nanitatra ny sidina Airbus A220 tany New York ihany koa, nameno fanitarana toy izany koa tao amin'ny foiben'i Boston izay nitombo haingana, hatrany Chicago (ORD), Dallas / Ft. Mendrika (DFW) sy Houston (IAH). Ny A220 dia manolotra mpanjifa traikefa malalaka sy maoderina miaraka amin'ny seza Kabine Main lehibe indrindra eo amin'ny fiaramanidina misy antsika, fitoeram-baravarana ambony avo be ary varavarankely lehibe kokoa.
Rehefa manakaiky ny vanim-potoanan'ny fitsangatsanganana amin'ny fialan-tsasatra ary ny Etazonia dia mamaky ny fanafoanana ny famerana ny fitsangatsanganana amin'ireo mpitsidika iraisam-pirenena vita vaksiny, Delta dia hanampy serivisy New York bebe kokoa amin'ny portfolio-ny manerantany amin'ny faran'ny taona 2021.
Manerana ny Atlantika, ny Delta dia hiasa hatramin'ny 15 sidina isan'andro mankany amin'ny toerana 13 amin'ny volana Desambra.
Delta dia hampiakatra avo roa heny ny sidina mankany Paris (CDG) sy London (LHR) hatramin'ny indroa isan'andro ary hampiakatra ny serivisy isan'andro ho an'i Dublin (DUB) manomboka ny 6 desambra.
Ho an'ny fialantsasatry ny ririnina, handefa sidina fanindroany isan'andro mankany Tel Aviv (TLV) i Delta manomboka ny 18 Desambra ary hamerina sidina mivantana mankany Lagos (LOS) intelo isan-kerinandro ny 7 Desambra.
Ho fanampin'izay, hamerina ny serivisy tsy an-kiato any Frankfurt (FRA) ny Delta amin'ny 13 Desambra, izay niasa farany tamin'ny martsa 2020.
Ho an'i Amerika Latina sy Karaiba, Delta dia hanao sidina mihoatra ny 20 isan'andro mankany amin'ny toerana 18, hamerina ny fahafaha-manao ho eo amin'ny 85% amin'ny haavon'ny pre-pandemic.
Ho an'ireo izay mitady fialan-tsasatra mafana, Delta dia hanomboka indray ny serivisy mankany São Paulo (GRU) sy Los Cabos (SJD) amin'ny 19 Desambra, ary hampitombo ny serivisy isan'andro ho an'i St. Thomas (STT) sy St. Martin (SXM) amin'ny 18 Desambra. .
Delta dia hanomboka serivisy vaovao avy amin'ny JFK mankany Panama City, Panama (PTY), amin'ny 20 Desambra.